Kutenga imba kana zvirinani pane rendi? | Ehupfumi Zvemari
Kutenga imba kana zvirinani pane rendi?
Jose recio | | Savings, Musha
Mumwe wemibvunzo yakakosha yauri kuzozvibvunza iwe panguva chaiyo yekuzvimiririra ndeyekuti zviri nani here kwauri Kutenga pasi kana zvinopesana, mhinduro yakanakisa inoenderana nekuhaya. Haisi sarudzo iri nyore kutora, asi inofanira kutsigirwa nekuratidzira kwakadzama. Mauri iwe unofunga nezve chii chinonzi mamiriro chaiwo ehupfumi hwako chako pachako kana mhuri. Kusvika padanho rekuti iwe unofanirwa kuongorora zvakakosha zvakadai sekunge une basa rekusingaperi, muripo wako chii uye kana imba yauri kuzogovana nevamwe vanhu.
Mukati meichi chiitiko, iwe unofanirwa kufunga kuti vangangoita vana kubva pagumi veSpanish kugara maroji kunosiya anopfuura makumi mana muzana emari yemhuri, imwe yemitengo yepamusoro muEuropean Union yose (EU), maererano nedata razvino rakapihwa neEurostat. Kusvika padanho rekubhadhara pamusoro pe40% yemari inowanikwa mudzimba inofungidzirwa neEU semubhadharo wakawandisa wehupfumi hwemba Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanira kuongorora kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, iyo real estate portal Casaktua yaitisa chidzidzo che "Kudiwa kwekugara muSpain. Makore gumi mushure mekutanga kwedambudziko ". Mune izvo zvinoratidzwa kuti 37% yevaSpanish vane chinangwa chekuchinja imba yavo muna 2018, 24% vanosarudza kuwana imba yavanayo, nepo chete 13% iri kutsvaga rendi. Mhedzisiro iyi inoratidza mafambiro matsva ari kuitiswa neSpain mumusika wezvivakwa kubvira, muna 2017 we31% vaida kuchinja imba yavo, 17% vaida kuwana chivakwa kana ichienzaniswa ne14% vaifunga kuiroja, zvinoreva kuti chinangwa chekutenga Kumba chawedzera 7%, nepo sarudzo yekurenda yakadzikira 1%.
1 Tenga kuroja imba
2 Zvakanakira kutenga imba
3 Zvimwe zvinokanganisa sarudzo iyi
4 Imba yekurenda: zvakanakira
5 Mamwe mabhenefiti ebhenefiti
6 Shades ehupenyu rendi
Tenga kuroja imba
Chero zvazvingaitika, pane imwe nzira yechitatu iyo inogona kukubatsira kuti kuchengetedza kwako kubatsire kupfuura mumisika yemari. Izvo ndezvekutenga imba yekuiroja imwe gare gare uye nenzira iyi uve nemari yakatarwa uye yakavimbiswa mwedzi wega wega. Mupfungwa iyi, iyi fomu nyowani yekudyara yasvika panhamba yepamusoro ye7,8%, mapoinzi matatu kupfuura mukota yechitatu ya2013, payakamira pa4,9%. Imwe yemabhenefiti ayo makuru iri mune chokwadi chekuti iwe unozogona kupfuudza kumahombekombe ezve izvo stock zvaunokupa panguva ino.
Uye zvakare, imwe yemabhenefiti akakosha eiyi imwe sarudzo mukudyara ndeyekuti iwe uchagara uine ichi chivakwa, zvisinei kuti chii chinoitika nemisika yemari. Nepo kune rimwe divi, nekuve nemba iwe unenge uripo pekushandisa ita kutengesa panguva iyo kuwongorora kwaunofunga kwakakodzera. Iko kwaunogona kuwana kuita pamusoro pe20%. Chikamu chakanyanya kuoma kuwana mune zvimwe zvigadzirwa zvemari (mari yekudyara, kutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya kana mari yekuchinjana-inotengeswa, pakati pezvimwe zvakakosha).
Zvakanakira kutenga imba
Iko kuwanikwa kweiyo real estate chivakwa kunounza iwe iwe nhevedzano yakakosha kwazvo mabhenefiti iwe aunofanirwa kuziva panguva ino. Chekutanga pane zvese, chii chichaita kwauri? wedzera yako wega kana yemhuri nhumbi uye kuti igovewo nhaka yako. Kuburikidza nechinhu chakanaka icho chinowanzo kukoshesa gore rimwe nerimwe. Sezvo mashoma zvigadzirwa zvemari zvinokupa iwe panguva ino. Uye kuti mukufamba kwenguva inogona kusvika padanho rinonakidza kwazvo kuzadzisa zvaunotarisira sediki uye wepakati investor.
Chimwe chinhu chinokosheswa panguva ino chinotorwa kubva kune yayo yakakwira rudo chinhu. Kwete pasina, ndeimwe chivakwa chauinacho uye icho chinoita kuti iwe uwedzere zvinhu zvako pachako pasi pemutengo wakakosha uye izvo zvisingakwanise kuitiswa zviri pamutemo kuburikidza nezvimwe zviwanikwa. Kune rimwe divi, ndiyo nzvimbo yaunogona kutungamira yako wega kana yemhuri hupenyu. Kusvika pakuti iwe unozogona kuita mabasa aunofunga kuti anodikanwa kuti ugadzikane.
Zvimwe zvinokanganisa sarudzo iyi
Pane zvinopesana, kutenga furati kana furati kunounza kwauri akateedzana ezvakanakira izvo ino kugarisana system inogona kukuunzira iwe. Huru dzese ndedze mari yemari chivakwa ichocho chinosanganisira. Kwete chete neruremekedzo kumutero wemutero unodzoka, asiwo avo vari padanho remunharaunda. Semuenzaniso, inozivikanwa zvikuru seBI uye inobhadharwa gore rega rega uye izvo zvinokoshesesa mari. Chinhu chaungadzivise kana iwe uchigara pane yekurendesa hwaro. Iwe unofanirwa kuongorora kuti zvakakosha here kutora mutero uyu.
Ehezve, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve kuti kutenga kwefulati kunokutadzisa iwe kubva kuve nekuwanda kwemari mune yako yekutarisa account. Nayo iyo yako yehupenyu hupenyu huchave hwakadzikira, sezvausingazokwanise kuve nemari yakawanda ku monetize mari pamusika wemari kana zvimwe zvigadzirwa zvemari. Ichi ndicho chimwe chezvinhu izvo vamwe vevanhu vanosarudza chirongwa chekurendesa seyakagarika sarudzo kukosha. Kusvika pakuti iwe unogona kuita zvimwe zvinhu zvakawanda kupfuura kana uine yako imba.
Imba yekurenda: zvakanakira
Iyi sisitimu yekugara mufurati ndeimwe yemhinduro dzevanhu vazhinji vasingakwanise kutora chikwereti kana kungova vasina mari yakakwana yekutarisana neiyi real estate oparesheni. Mupfungwa iyi, chirevo chakambotariswa chinoratidza kuti chimiro chinosarudza kuhaya mukadzi ane makore 25 kusvika 34 ekuberekwa. Kukuvadza mutengi uyo anosarudzwa nemurume ari pakati pemakore makumi matatu nemashanu kusvika makumi mashanu nemana ekuberekwa, ane mudiwa nevana. Nenzira iyi, iyi sarudzo mudzimba inoumbwa senzira yekupedzisira kuti ive yakazvimirira. Kunyanya, nechidiki chikamu chevanhu vari ivo vanonyanya kugadzira iyi real estate oparesheni.
Asi kana paine chero chinhu chinoratidzira chirongwa chekurenda, izvo hazvisi zvimwe izvo zvinokupa iwe kunzwa kwerusununguko rukuru uye mikana yekufamba kwenzvimbo kana paine shanduko yedunhu kana nyika nekuda kwebasa kana mamiriro emunhu. Hazvishamise kuti zvisungo zvezvinhu zvichave zvakadzikira zvakanyanya kupfuura kuburikidza neimwe imwe nzira yatiri kutaura nezvayo muchinyorwa chino. Kana iwe haugone kukanganwa kuti ino yekugara system inokubatsira iwe kuisa mari kuti ukunde pamusoro pechisungo zvinoenderana nekusimudzira zvakanyanya kana kushomeka simba bhegi rekuchengetedza
Mamwe mabhenefiti ebhenefiti
Kunyangwe nekutenda kwakanyanya kana kushoma kuti kuroja kunogara kuchikonzera matambudziko, pane zvinhu zvinoverengeka zvinogona kukubatsira kushandura pfungwa dzako kubva panguva chaidzo idzi. Imwe yeakanyanya kusimbiswa inoenderana nepfungwa yekuti iyi sarudzo iyo pamusoro pezvose inokutendera kuti ugare munzvimbo yeguta iwe yaunoda. Kusvika pakukwanisa kuita a Shanduko yekero chero bedzi iwe uchisarudza kana kushandura ako wega mamiriro. Chinhu chinonyanya kuomarara kupfuura kana iwe uine imba yakatengwa. Kwete pasina, iwo mamiriro ezvinhu ausingafanire kufuratira kana uchisarudza nzira yako yehupenyu kwemakore mashoma anotevera.
Kune rimwe divi, iwe uchave uine simba real estate offer kuitira kuti iwe ugone kusarudza yakanakisa imwe nzira yekugara pamwe kubva ikozvino. Nezvakanakira kuti kana ukakanganisa iwe unogara uine mukana wekugadzirisa sarudzo iyi yawakaita. Nekuti iwe unogona kutanga iyo nyowani nyowani chero nguva yaunoda. Hapana mazwi ekugara zvachose, kupfuura aya akaratidzirwa muchibvumirano chawakasaina nemuridzi wepfuma.
Shades ehupenyu rendi
Pane zvinopesana, pane zvakateedzana zvezvakaipa izvo zvinotungamirwa nenyaya yekuti kugara mumba mako kuchakupa iyo kunzwa kwekuchengeteka. Izvi ichokwadi, kunyangwe usati wabhadhara chikwereti chawakumbira mubhangi raunoshanda naro. Zvakare, kugara mune rendi hakuzokutenderi kuti uvandudze zvinhu zvako. Kusvika padanho rekuti iwe unenge uine shoma midziyo yekusiira kune vako vadyi venhaka. Chinhu chakakosha kwazvo kukoshesa, kunyanya mune varidzi vane zera rakura.
Kuronga hupenyu hwako kunogara kuchinyanya kuomarara kana ukasarudza kugara mune rendi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti uchanzwa usisina dziviriro kune zvinogona kuitika kwauri mumakore anotevera. Nematambudziko akakomba aunotofunga kuti haugone kutora mari yekurenda yeiyi nzvimbo yekugara. Ivo, muchidimbu, zvimwe zvezvinhu zvaunofanira kuongorora nguva imwe neimwe dambudziko iri rinokosha parinomuka munzira yemba yaunoda yemakore anotevera. Naizvozvo, iwe unozoda kufungisisa kwakanyanya kwazvo kwausingakwanise kugadzirisa mumaawa mashoma. Hapana mazwi ekugara zvachose, kupfuura aya akaratidzirwa muchibvumirano chawakasaina nemuridzi wepfuma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Savings » Kutenga imba kana zvirinani pane rendi?
Ndeapi makadhi eVIP akafanana?